Guuridda phone cusub Android? Waxaa laga yaabaa inaad rabto in ay u gudbiyaan xogta jir si aad u phone cusub. Haddii aad Sony loo isticmaalo sida telefoon, ka dibna xogta wareejinta ma sahlanaan doonto, gaar ahaan, Iyadoo aan la Isticmaalin Premier software xisbiga saddexaad. In kastoo macluumaadka la software wareejinta waxaa suurtagal ah, laakiin ma fududa. Hab lacag la'aan ah si ay u gudbiyaan xogta aad ka mid ah si fudud gacanta wareejinta xogta jir meesha aad kuu pc ka dibna u gudbaayo cusub Android.
Ka hor tagno tallaabooyinka, halkan shuruudaha.
Phone New Android
Halkan waxa ku jira talaabooyin aad u baahan tahay si ay u kala iibsiga.
Connect telefoonka jir Sony si aad Computer oo la furo ka sahamisa faylka. Waxaa la ogaan doonaa sida saari disk ama magaca telefoonada muuqan doonaa. Marka aad u furi doonaa waxaad u leedahay in laba doorasho lagu kaydiyo gudaha iyo kaarka SD.
Tallaabada Next ku xiran tahay nooca faylasha aad rabto in lagu wareejiyo. Xaaladdan oo kale, aad raadinayso si ay u gudbiyaan sawirada. Tag card SD oo hoos folder DCIM, waxaad ka heli kartaa oo sanamyada aad qaadatay. Just iyaga nuqul oo badbaadiyo on inay your computer.
Habkan waxaad u baahan doontaa in mid mid u hesho files ka kaydinta aad gudaha iyo kaarka SD. Just xirmaan aad telefoon si PC iyo file ka mid ah lagu wareejiyo on inay aad telefoon cusub. Habkani waxa uu leeyahay arrimaha weyn:
Habka qaadataa weyn ee waqtiga si aad u ogaato faylasha iyo wareejiyo mid mid.
Dhowr tallaabooyin dheeraad ah ayaa looga baahan yahay si ay u gudbiyaan xogta sida xiriirada. Waxaad heli doontaa inay u dhoofiyaan xiriiro oo ah qaab eCard iyo eCard in wareejiyo phone Android.
Waxa ay noqon doontaa wax aan macquul aheyn si ay u gudbiyaan barnaamijyadooda. Waxaad si loo soo dajiyo barnaamijyadooda cusub oo ku saabsan qalab Android aad.
Xal wanaagsan: 1 click in xogta ka Sony wareejiyo qalabka kale ee Android
Waxaa jirta waddo dadka wanaagsan in lagu wareejiyo dhammaan xogta ka Sony in qalabka kale ee Android. No, ma rasmiga, ma waxaad tagay
MobileTrans Ku siinayaa qalab weyn oo utility si ay u gudbiyaan xogta aad ka Sony in Android in mid ka mid click. Waxaad ku wareejin kartaa xiriirada, files warbaahinta, fariimaha qoraalka ah, jadwalka taariikhda, barnaamijyadooda, iyo Guda wac mid ka mid kaliya click. Hoos waxa ku muuqaalada MobileTrans ah:
Software shaqeeya OS oo dhan sida Android, Windows, macruufka, iyo Symbian. Software wuxuu taageeraa in ka badan saddex kun oo casriga ah.
Sidoo kale Software waxay leedahay raad raac ah iyo soo celinta muuqaalada si ay u maareeyaan xog ku saabsan in aad telefoon mustaqbalka.
Waxa kale oo aad marna masixi karin xogta oo dhan ka telefoonka haddii aad qorsheyneyso inay iska iibiso aad telefoon ama dib joogto ah oo keliya si loo hagaajiyo waxqabadka.
Habka ay u kala iibsiga waa mid fudud oo qaadataa qasabno yar oo dhowr daqiiqo.
Halkan waxa ku jira tallaabooyin si ay u gudbiyaan xogta la isticmaalayo MobileTrans
Inta aynaan u gelin tallaabooyinka. Fadlan fiira gaar ah looga baahan yahay.
MobileTrans, Fiilooyinka USB ah ee telefoonka ka soo jeedaan, Computer iyo labada telefoonada.
Step1. Burcad software on your computer. Tag sanduuqa buluug midab, taas oo ka dhigan in Phone kala iibsiga Phone, oo guji ku yaal.
Tallaabada 2. Isku labadaba telefoonada in computer isticmaalaya cable USB. Fiiro gaar ah, aad isticmaalayso cable USB saaraha kala ee natiijada ugu wanaagsan. Software ogaan doonaa telefoonada aad.
Tallaabada 3. Hadda hubiyaan, aad Source waa telefoonka Sony iyo meel loo ahaadana iyadaa waa telefoonka aad Android. Haddaba tag in goluhu ay gacanta dhexe ay doortaan content aad rabto in aad nuqul. Numbers file ah nooca xogta qaarkood la tilmaamay ka sokow nooc kasta.
Tallaabada 4. Marka aad dooratay ka kooban. Just guji Start Copy oo xaqiijin tallaabada ku sanduuqa soo socda wada hadal. Next, waxaad la qaadi doono si uu suuqa kala ah meesha aad u helida xaalada kala iibsiga. Waqtiga lagu qaato ee suuqa kala iibsiga ku xiran tahay tirada files.
Sida ugu dhakhsaha badan kala iibsiga la dhamaystiro, in aad barkinta kartaa telefoonka ka kombiyuutarka. Hubi telefoonka aad android u xogta. Waxaad xiriirada, image, fariimaha qoraalka ah, jadwalka, iyo waxyaabo kale oo badan oo la cusbooneysiin doonaa. Software ayaa lagala soo bixi karaa website Wondershare. Version tijaabo waa si xor ah u soo bixi, laakiin waxa uu ku kooban muuqaalada. Waxaad heli doontaa inaad iibsato buuxa featured version laakiin waxaa la jaban kharash macquul ah.
Way fududahay in xogta ka Sony wareejiyo Android. Isticmaalka MobileGo Wondershare kaa caawin karaan sidii geeddi-socodka oo dhan fudud. Xusuusnow, waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay mar bixiso. Taas macnaheedu waa in aad ka abaalmarinayn dhan ah goobaha ay ka bixin mar walba oo aad u baahan tahay inaad xog ka mid phone wareejiyo kale. Plus, Wondershare MobileGo Waxba tari mayso, kaliya aad xogta ka Sony wareejiyo Android, laakiin mid ka mid OS si kale aad ka mid yihiin Windows in Android. Waa wax badan ka sahlan in ka badan sida ugu free.
Waa kuwee Sony telefoonada badan yihiin caanka ah ee Maraykanku ku?
Sony waa caan ah oo ku kalsoon tahay calaamad ka mid ah dadka isticmaala smartphone. In kastoo waxa laga yaabaa inay wax yar ka danbayso Samsung iyo Apple, waxaa weli saldhig xooggan oo dadka isticmaala ee USA. Halkan waxa ku jira telefoonada sare Sony laga heli karo suuqa.
Is 4. Sony Xperia Z1
Kuwani telefoonada ee liiskaan ku jira dhowr ka mid ah soo saaraha hadda iibka weyn ee casriga ah. In mustaqbalka, waxa ay sii daayo telefoonada cusub sida Sony Xperia m2 iwm, oo ku siinaya fursado cusub oo faa'iido in dadka isticmaala ay. The telefoonada Sony waxaa mar kasta oo lagu yaqaano qaab u gaar ah, design, iyo waxqabadka gaar u tahay Sony.
> Resource > Android > Sida loo kala iibsiga xogta ka Sony in Android